RASMI: Atletico Madrid Oo Xaqiijisay In Lacagta Ay Barcelona Bixisay Maanta Aysan Ku Filneyn In Lagu Burburiyo Qandaraaska Antoine Griezmann - Gool24.Net
RASMI: Atletico Madrid Oo Xaqiijisay In Lacagta Ay Barcelona Bixisay Maanta Aysan Ku Filneyn In Lagu Burburiyo Qandaraaska Antoine Griezmann
Atletico Madrid ayaa xaqiijisay inay maxkamad la korayaan Barcelona ka dib markii ay maanta la wareegeen weeraryahan Antoine Griezmann, waxaana ay dalbanayaan in kooxda Catalans ay bixiso 80 milyan euro kale.
Madaxda Barcelona ayaa bixiyay 120 milyan euro oo ah lacagta lagu burburinayay qandaraaska Griezmann iyagoo geeyay xarunta La Liga ee Madrid, waxaana tan iyo markaas ay Barcelona shaacisay inay si rasmi ah u la soo wareegtay xiddiga Faransiiska.
Si kastaba, Atletico Madrid ayaa ku doodeysa in Barcelona ay heshiis la gaartay ciyaaryahanka ka hor inta aysan lacagta lagu burburinayay qandaraaskiisa noqonin 120 milyan euro oo ay aheyd 200 milyan euro sidaasi darteed ay Barcelona ka doonayaan 80 milyan euro oo dheeri ah.
Atletico ayaa sheegtay in qandaraaska ciyaaryahanka uu burburay markii ay Barcelona heshiis la gaartay ciyaaryahanka bishii March sidaasi darteedna ay tahay in Blaugrana ay bixiso 200 milyan euro oo ay 80 milyan euro ku soo darto lacagta ay maanta bixiyeen ee 120ka milyan euro.
“Antoine Griezmann oo uu wakiil ka yahay qareenkiisa ayaa maanta gaaray xarunta La Liga si uu burburiyo qandaraaskii isku hayay ciyaarayahanka iyo Atletico Madrid isagoo lacag uu ka soo qaaday Barcelona oo gaareysa 120 milyan euro dhigay xarunta” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay Atletico.
“Atlético de Madrid waxa ay aaminsan tahay in lacagta la dhigay xarunta La Liga inaysan aheyn mid ku filan in lagu burburiyo qandaraaska ciyaaryahanka, madaama ciyaaryahanka iyo FC Barcelona ay heshiis gaareen markii lacagta lagu burburinayay qandaraaskiisa ay aheyd 200 milyan euro oo aysan noqonin 120 milyan euro.
“Waxa ay sidoo kale ka horeysay heshiiskooda inta uusan ciyaaryahanka shaacinin inuu kooxda ka tagayo 14kii bishii May.
“Atletico Madrid waxa ay aamisan tahay in qandaraaska ciyaaryahanka uu burburay ka hor dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore sababo la xiriira talaabooyinka uu qaaday ciyaaryahanka waana sababta uu u bilaabay inuu ka fekero dantiisa.”